कसको हातबाट लगाए राष्ट्रपति देखी शीर्ष नेतासम्मले दशैं टिका ? « Mazzako Online
कसको हातबाट लगाए राष्ट्रपति देखी शीर्ष नेतासम्मले दशैं टिका ?
काठमाडौं । नेपालीहरुले आज आफ्नो महान चाड बिजया दशमी देशभर मनाईरहेका छन् । दशैंमा विशेष गरि आफुभन्दा मान्यजनबाट टिका तथा जमरा थापेर आर्शिवाद लिने प्रचलन छ ।
बैशाख १२ को महाभूकम्प, संविधान जारी हुनुको तरा मधेशको आन्दोलन र संविधान जारी पछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बाबजुत पनि नेपालीहरुले यी सबैलाई आफ्नो महान पर्व मनाई रहेका छन् ।
देशभर सर्वसाधरणले आफुभन्दा मान्यजनाबाट टिका लगाएर दशैं मनाएका छन् । तर, राष्ट्रप्रमुख देखि प्रधानमन्त्री र शीर्षस्थ नेताहरुले चाँही कसको हातबाट टिका थापे होलान ?
राष्ट्रपति डा रामवरण यादव शीतल निवासमा हनुमानढोका दसैँघरका मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट विजया दशमीको टीका लगाउँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस
राष्ट्रप्रमुखको रुपमा देशका अभिभावक मानिने राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले हनुमानढोका दसैँघरका मूल पुजारी देवराज अर्याल र पण्डित शङ्करप्रसाद सिग्द्यालबाट विजया दशमीको टीका लगाए । उनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विहान १०ः५५ बजेको शुभसाइतमा विजया दशमीको टीका लगाएका थिए ।
राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले शास्त्रोक्त विधिपूर्वक अभिषेक गर्दै जमरा र नवदुर्गाको प्रसाद प्रदान गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो परिवारका सदस्यलाई दसैँको टीका लगार्इ दिए ।
प्रधानमन्त्री एवं केपी शर्मा ओलीले आफ्ना ८५ वर्षीय बुबा मोहनप्रसाद ओलीबाट दशैंको टिका लगाए । उनले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा विहान १०ः५५ बजेको शुभसाइतमा टीका लगाएका थिए । ओलीले आफ्नी बुहारी एवम् प्रधानमन्त्री पत्नी श्रीमती राधिका शाक्यलाई पनि टीका लगादिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा टीका र जमरा लगाई दिएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ससुरा विनोद शमसेर जवरा र सासू प्रतिभा राणासँग टिका लगाए । एमाले बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मातापिता नभएकाले आफूले श्रीमती रवीलक्ष्मी चित्रकारलाई र श्रीमतीको हातबाट आफूले पनि टीका लगाएको लगाए ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ८५ वर्षीय पिता भोजप्रसाद भट्टराईको हातबाट टीका लगाए । भट्टराईले शानेपा स्थित आफ्नो निवासमा टिका लगाएका हुन् ।